विपती पछिको जनजीवनलाई सामान्य बनाउन कलाकारको भूमिका के ? – Himal FM 90.2 MHz
विपती पछिको जनजीवनलाई सामान्य बनाउन कलाकारको भूमिका के ?
कला र साहित्य Author May 31, 2015
मनमा भुकम्पको त्रास बोकेहरुलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन कलाकार र संगीतको फरक भूमिका रहने गर्छ । उनीहरुले प्रभावितसामु पुगेर गीत गाउने नचाउने मात्र होईन्, विभिन्न हस्यौली ठट्यौली प्रस्तुती दिएर प्रभावितलाई पिडा भुल्नमा सहयोग गर्न सक्छ ।
भुकम्प गएको महिना बढी भईसक्दा पनि जनजीवन सामान्य बन्न नसकिरहेको बेला नेपाल सरकारका पुर्ननिर्माण संभावना दुत मध्येका एक वरिष्ठ हाँस्य कलाकार हरिबंश आचार्य नेपाली भुकम्प फ्रेण्ड्ली बन्दै जानुपर्ने बताउछन् । उनी भन्छन् – भुकम्पलाई छिमेकी मानेर मिलेर बस्नुपर्छ । भुकम्पमैत्री भौतिक संरचना बनाएर हैन, भुकम्पमैत्री संरचना निर्माण गरी साथीजस्तै बन्नुपर्छ ।
अविभावक भन्दा बालबालिका अझ त्रसित छन्, उनीहरुको बाल मनोविज्ञानमा गहिरो प्रभाव परेको छ । प्रभावित मनोविज्ञानलाई गीतसंगीतको साथले केहि हदसम्म सन्तुलन गर्न सक्ने लोक गायिका कोमल ओलीको ठम्याई छ । उनी र गायक रामकृष्ण ढकालले राहत वितरणको चरणमा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा परेको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर बालबालिका जम्मा गरी गीत गाएर नचाउने काम समेत गरे । गायिका ओली भन्छिन् – बालबालिकालाई थप त्रास भन्दा पनि सान्त्वनाका साथै त्रास भुलाउन मनोरन्जन दिनुपर्छ ।
मनको त्रास भुल्ने माध्यममध्ये गीत जस्तै हाँस्यव्यंग्य पनि उत्कृष्ट माध्यम बन्न सक्छ । शौचालय तथा अस्थायी टहरा निर्माणमा सक्रिय नेपाल सरकारका सरसफाई दुत समेत रहेकी हाँस्य कलाकार कुन्जना धिमिरे – सुन्तलीले पनि प्रभावितहरुलाई हसाँउदै हिडेकी छिन् । उनी भन्छिन् – कलाकारले क्यारिकेचर मार्फत ठूलो भुकम्प छिट्टै नआउने सानत्वना दिदा पनि प्रभावितहरुमा त्रास कम हुन्छ । त्यसकारण सबै कलाकारले आफ्नो क्षमता अनुसार प्रभावित क्षेत्र पुगेर मनोरन्जन प्रदानका साथै अन्य सहयोग गर्नपर्छ ।
विपत्पछि कलाकारलाई एकिकृत गर्न नसकेको राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले अब केहि गर्ने गरी छलफल गर्ने भएको छ । प्रतिष्ठानका एक जना केन्द्रिय सदस्य सुवास केसी त्रासवाट मुक्त दिलाउन सहयोग गर्ने हिसावको कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने बताउछन् । उनले त्रास भुल्नका लागी साथीभाई, आफन्तसंग भेट्ने, गफिने, आफ्नो नियमित काममा व्यस्त हुनु उत्तम उपाय हुनसक्ने बताए ।
कलाकार पिएन सापकोटा भुकम्पको गीतहरु लेखेर गाउने कलाकार प्रति गुनासो पोख्दै भने – कलाकारले प्रभावितहरुको मनमा राहत प्रदान गर्ने भन्दा पनि उहि कहालीलाग्दो घटनालाई सम्झाउने प्रयास गरिरहेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा आरोपप्रत्यारोपमा उत्रनु भन्दा प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर त्रासदीपुर्ण जनजीवनलाई सामान्य पार्नमा ध्यान दिन अन्य बलाकारलाई सुझाए ।
केहि कलाकार सामाजिक संञ्जालमा आलोचना र गालीमा उत्रेका बेलामा एकताबद्ध भई कार्यविभाजनका साथमा प्रभावित क्षेत्रमा मनोरन्जन दिलाउन मात्र नभई स्वास्थ्य चेतना अभिबृद्धिमा पनि खट्न सक्नुपर्छ ।
प्रस्तुती – शिखरजंग श्रेष्ठ (गाउँबेशीको ठिटो)